UJEN ANISTON UTHI IXESHA LAXA WADIBANA NOJUSTIN THEROUX WAYEGQIBELELE - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato UJennifer Aniston uthi ixesha laxa wadibana noJustin Theroux wayegqibelele-ngaphandle koPhicotho lwabahlobo bakhe.
UJennifer Aniston uthi ixesha laxa wadibana noJustin Theroux wayegqibelele-ngaphandle koPhicotho lwabahlobo bakhe.
UJennifer Aniston wavula malunga nokudibana noJustin Theroux kwiminyaka emva kokuba ephose uvavanyo lwakhe 'lwabahlobo'. (Shutterstock.com)
Ngu: Esther Lee 08/21/2017 ngo-5: 00 PM
Akukho kuzisola apha! Kule veki iphelileyo, UJustin Theroux utyhile indlela awayekhe weqa ngayo uphicotho-zincwadi lwezintandokazi ze-90s sitcom Abahlobo , owathi ekugqibeleni waqalisa ikhondo lomsebenzi wokuba ngumfazi wakhe, UJennifer Aniston , Kunye neenkwenkwezi zakhe. Khange ndizikhathaze, umdlali we-HBO uxelele uMnu Porter Ijenali . Ndalala ngalomini. Ngendingazange ndikulungele [ukuduma].
isipho seshawa somtshato esivela kwintombazana ehloniphekileyo
Endaweni yoko, esi sibini sadibana kumashumi eminyaka kamva kwiseti ye-movie ye-2012 Ukuhambahamba; Ngelo xesha, zombini iinkwenkwezi zazingatshatanga kwaye ekugqibeleni zatshata kumtshato wasemva kwe-2015. Kwaye ngelixa aba babini bekwazi ukudibana ngokukhawuleza, uAniston ugcina ukuba ixesha lalingenakulinganiswa.
Owu, yayigqibelele xa sidibana-sigqibelele, watsho uAniston Yena ngoMvulo, Agasti 21 Kwaye khange alale [kuvavanyo]! Wayengafuni nje ukukhwela inqwelomoya. Wayengafuni ukuhlala eCalifornia ngelo xesha. WayeyiNew Yorker iyonke, kwaye wayengahambi.
Umlingisi kunye nommeli wentlalontle, i-48, uxelele iphephancwadi ukuba wabelana ngeendlela ezifanayo nomyeni wakhe, ngakumbi xa kusenziwa ukhetho lokuphila ngendlela esempilweni. Ulungile ngexesha lam kakade, utshilo uAniston. Sithanda kakhulu kwaye yiyo loo nto sihlangana kakuhle. Sineemvakalelo ezifanayo kakhulu, kwaye uneqela elimangalisayo labahlobo, naye, awayenalo ngonaphakade. Bayamangalisa, ngabantu abahloniphekileyo, abanesidima. Uyayazi indlela yokuzikhathalela.
Ewe, omnye wabahlobo babo abasenyongweni, uJimmy Kimmel, uncede ekuqhubeni itheko labo emva kwendlu ngonyaka ka-2015. UTheroux wayefotwa exubana neeveki ezimbalwa ezidlulileyo kwikhonsathi yaseBudapest nabanye abalingisi be-A uMila Kunis no-Ashton Kutcher.
Kwaye xa kuziwa kumboniso uqobo, Abahlobo , U-Aniston usenobabalo ngokwaneleyo ukuba anelise uluntu ngeziphumo ezinokubakho. (Khange atshintshe isimo sakhe nakanye kwaye uhlala #TeamRossandRachel ngonaphakade.)
ABAHLOBO-Lowo unomtshato kaRoss: Icandelo 2 Isiqendu 24 -Umfanekiso: (lr) UMateyu Perry njengoChandler Bing, uJennifer Aniston njengoRachel Green, uDavid Schwimmer njengoRoss Geller, uHelen Baxendale njengoEmily Waltham, uCourteney Cox njengoMonica Geller, Matt LeBlanc NjengoJoey Tribbiani (Ifoto ngu-Oliver Upton / NBC / NBCU Photo Bank ngokusebenzisa imifanekiso kaGetty)
Ndicinga ukuba bekukho umzuzu xa uJoey noRachel behlangene ukuba mhlawumbi kungenzeka, kodwa ayenzekanga, utshilo. KwakunguRoss noRachel yonke indlela. Ndiyakholelwa ngokwenene ukuba kukho umhlaba wangemva Abahlobo , zisaphumelela. Akunjalo? Andiqondi nje ukuba uJoey noRachel babenokuyenza. Ndicinga ukuba kwakungokomzimba kunokwasemphefumlweni kunye nabo. Babengabahlobo ngezibonelelo, kwaye bayishiya loo nto.
UTheroux, okwangoku, uye wabelana ngokuphindaphindiweyo ngeengcinga zakhe malunga nokuya emtshatweni ophumeleleyo, kutsha nje ecacisa uburharha. Kutheni indoda ingoyikiswa ngumfazi ohlekisayo? i Indawo eseleyo Umdlali weqonga uthe kuMnu Porter. Kwihlabathi eligqibeleleyo, ubudlelwane ngabantu ababini abahleka kunye.
indlela tie iqhina lula
iingoma malunga nonina nonyana
eyona ndawo oya kuyo ngokugqibeleleyo xa utshatile ngo-Okthobha
iinwele zomtshato ezinesigqubuthelo kunye ne-tiara
bafake imisesane yomtshato ngasekunene